Aluminium Manera, Aluminium Rori Bhokisi, Aluminium Pallet - YSXF
Yedu MaxxHaul Trailer Tongue Bhokisi rakagadzirirwa kumisikidza kumatrailer ane A-Rimi furemu kuti ipe yakawedzera kuchengetedza maturusi ako, musasa magiya, chengetedzo ngetani, tambo, mabutiro emotokari, zvekunze zvekunze, tambo, hitch accessories, tambo, vhiri choki uye nezvimwe zvakawanda. . Usambofa wakakanganwa chishandiso kana giya paunenge uchizvida! - Yakagadzirwa kubva mukusimba uye ngura-inodzivirira mwenje-mu-huremu aluminium zvinhu ine yakazara welded musono kuvaka uye yakaoma rigid upfu jasi kupedzisa - Diamond ndiro pateni inopa yakawedzera yakasimba ...
MUDZIMAI WEMAHARA WEZVINONYANYA KUKWEDZA NOKUTAKURA - Iri bhokisi rematurusi rakagadzirwa neyakaomarara asi isina huremu hwekuvaka kukwira kumberi kweA-Freyera mataera mataera. Nyore kuungana, yakanaka kutakura kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe kana zvichidikanwa. Mhinduro huru yekuchengetera maturusi ako kana zvinhu mugaraji rako uye inowedzera imwe nzvimbo yekuchengetera kune yako yakavharika tirera. ✅ DURABLE DIAMOND RUGGED DESIGN - Yakagadzirwa ine rugged aluminium ine yakazara welded seams, yekushandisa zvisina kunaka. Yekuchengetera bhokisi rekushandisa richapururudza ...
Chigadzirwa Nhanganyaya China ndiyo inonyanya kuburitsa kunze kwenyika zvigadzirwa zvemumvura.Ndiyo nzvimbo inogadzirwa zvigadzirwa zvemumvura uye zvakaomeswa nechando. Yazvino Main Musika, mazhinji echando zvinhu zvinoshandiswa epurasitiki, simbi isina chinhu, kwakakurudzira bhodhi uye zvichingodaro.Vane hurombo hwekupisa conductivity, yakakwira simba kudyiwa, nyore kukuvadza, uye yakaoma kushanda maitiro. Chigadzirwa chacho chakagadzirwa nemhando yepamusoro yealuminium sheet. Iine zvakanakira hupenyu hwakareba hwebasa, yakanaka kupisa kupisa uye quic ...
Chigadzirwa Chiedza Kurema Kunotakurika Mota Aluminium Kupeta Manera Ruvara Sirivheri, Dema kana sekukumbirwa Style Yakasarudzika Saizi Yakasarudzika Surface kurapwa Non / Oxidation Feature Yakasimba simba, ngura kuramba, Chiedza uremu Zvigadzirwa Ratidza
Aluminium alloy guardrail inowanzo shandiswa padivi kudzivirira matiraki, matrailer, uye mota dzeinjiniya, idzo dzinoita basa rekudzivirira, kukwira, uye runako; aluminium alloy guardrail ine huremu hwakareruka, kugadzikana kwakanaka, yakasimba oxidation kuramba, ngura kuramba, runako, uye kutakura-kutakura Uye kuomarara kunogona zvakare kusangana nezvinodiwa zvinodiwa; chimiro uye saizi inogona zvakare kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Zvigadzirwa Ratidza
Chigadzirwa Nhanganyaya, yakakwira-kukwirisa inoshanda chikuva chakagadzirwa uye chakagadzirwa nekambani yedu.Iyo inogadzira tekinoroji inoitwa nekuvandudza zvigadzirwa zvemumba.Iyo inogadzirwa nealuminium profile welding uye bolt fixing mamiriro. Ine mudziyo unorema pazasi, uyo unozongoerekana warira kana mutoro uchidarika huremu hwakachengeteka, ichivandudza kuchengetedzwa kwechigadzirwa. Chigadzirwa Chigadzirwa Cargo Anotakura Anosimudza Aluminium Alloy Platform Ruvara Sirivheri, Dema kana sekukumbirwa ...
Chigadzirwa Nhanganyaya Ichi chigadzirwa ikambani yangu yakazvimirira yekutsvaga uye kusimudzira kwemukati r & d timu yezvigadzirwa zvinoshanda, imwe yekushandiswa kukuru muboka re xugong, nemamwe mabhizinesi, yakahwina musika mukurumbira. Saizi uye chimiro zvinogona kugadziriswa zvinoenderana zvigadzirwa zvemotokari, zvinoderedza kuisirwa kwemamwe matambudziko akaomarara. Zvigadzirwa Zvemukati 1. Yemukati shandisa akasiyana ekusimbisa chimiro, ichienzaniswa nezvimwe zvinhu, zvinobudirira kudzivirira dambudziko re deformat ...
Chigadzirwa Nhanganyaya Pallets anonyanya kushandiswa kuitisa mari mune yekuchengetera uye logistics.Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuchengetedzwa kwechikafu uye zvimwe zvinhu zvave kuwedzera mukurumbira Aluminiumalloy pallet, seinotsiva matanda pallets, mapurasitiki pallets uye simbi pallets, Iwo ave achishandiswa zvakanyanya munyika dzakasimukira senge Europe neAmerica. Chigadzirwa Chigadzirwa Ruvara Sirivheri, Dema kana sekukumbirwa Kurema 18-25kg / Yakasarudzika Saizi 1200 * 800 * 152/1200 * 1000 * 152/1219 * 1016 * 15 ...
Xuzhou Caixin Aluminium Zvigadzirwa Co, Ltd. inogadzira zvigadzirwa zvealuminium zvine zvivakwa zvakashongedzerwa zvekuyedza uye yakasimba hunyanzvi hunyanzvi. Nemhando dzakasiyana siyana, mhando yakanaka, mitengo inonzwisisika uye dhizaini dhizaini, zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya mumhepo magetsi emagetsi inogadzira. zvishandiso, michina inorema uye mota, midziyo yezuva nemamwe maindasitiri. Zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa zvakanyanya uye zvinovimbwa nevashandisi uye zvinogona kusangana nekuchinja shanduko yezveupfumi uye zvemagariro. Tinogamuchira vatengi vatsva nevekare kubva kumatunhu ese kuti vatibate kuitira ramangwana rehukama hwebhizinesi pamwe nekubudirira!
Aluminium chaiyo kukanda kunogona kuitwa muzvigadzirwa zvealuminium. Kunyangwe zviyero uye maumbirwo akasiyana, saizi chaiyo, kutaridzika kwakanaka uye kuita kwakadzikama kunogona kubatsira vanhu nevanhu, uye nekuvaka rakasiyana ruvara rwehupenyu. Muhupenyu hwedu, panogara paine kambani yealum ...
Aluminium Bhokisi Rekushandisa
Aluminium alloy toolbox ndechimwe chezvigadzirwa zvealuminium bhokisi zvigadzirwa. Iyo mhando yebhokisi iyo inoumbwa nealuminium alloy zvinhu kuti uwane kushanda kwekuisa maturusi uye ekuyera maturusi. Yakasiyana nemamwe mabhokisi ematurusi, iri bhokisi rematurusi rine aruminiyamu chiwanikwa. Cha cha ...
Hunhu uye mashandisiro emaindasitiri aluminium profiles
Zvimiro 1. Kune akasiyana maratidziro uye saizi, uye saizi yerutivi rurefu uye rwupfupi divi wakawanda. Semuenzaniso, edu akajairika 4040, 4080, 40120, 4040 akaenzana, mativi mana ari 40mm, uye 4080 ndiyo yakareba divi 80mm. Rutivi pfupi i40mm, uye iyo lo ...